Occlusive रोग - लक्षण र उपचार
occlusive रोग - यो भास्कुलर रोग, तल्लो limbs को सामान्यतया, कम्तिमा - शीर्ष साथै मस्तिष्क र हृदयको जहाजहरु। रोग पुरातन समयका देखि ज्ञात र विभिन्न नियम यसलाई गरिएको छ: "femoral एनजाइना", "endarterioz", "अनिरंतर claudication", "Buerger", "trombangiit"। उहाँले मुख्य रूप 20 50 वर्ष देखि मानिसहरू उजागर, त्यहाँ सक्रिय उमेर मा मान्छे हो।
पनि XIX सताब्दी रूसी सर्जन को अन्त मा A.A.Vvedenskim occlusive रोग कठोर जलवायु संग क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दा बीच धेरै साधारण छ, र वृद्घि तिनीहरूले चिसो मौसम मा ठीक उत्पन्न कि उल्लेख गरे। यो उल्लेख गरेको छ कि कुपोषण र ऊतक संवेदनशीलता गर्न क्रमबद्घ र ठंडा शीतदंश limb नेतृत्व।
तर, रोग तातो वा समशीतोष्ण जलवायु संग देशहरूमा हुन्छ, त्यसैले यसलाई वृद्धि मात्र कम तापमान को प्रभाव रोग को कारण छ कि भन्न असम्भव छ। धेरै वैज्ञानिक अध्ययन वृद्धि clotting र देखाएका छन् रगत चिपचिपाहट, प्रमुख जहाजहरु मा घटाउन र ढिलो केशिका रगत प्रवाह र निकोटीन सक्षम। धूम्रपान समयमा त्यहाँ अवरोध गरेपछि पुन:5मिनेट देखि 1 वा थप घण्टा गर्न आवश्यक जसमा छाला तापमान को lowering स्पष्ट छन्। यो एक चुरोट व्रत विरामीहरु endarteritis, हुन सक्छ धूम्रपान कि प्रकट vasospasm अप 17-18 घन्टा लागि।
रोग यांत्रिक र मनोवैज्ञानिक आघात हुन सक्छ प्रकुपित। उदाहरणका लागि, अनुसन्धानकर्ताहरूले अश्गाकुरा मा भूकम्प पछि, शहर बासिन्दाहरू बीच endarteritis रोगहरु को संख्या3पटक वृद्धि भएको छ कि फेला परेन। यो पनि ज्ञात छ, विश्व युद्ध (पहिलो र दोस्रो) संसारका प्रायः सबै देशहरूमा पछि यो रोग को घटना एक तेज वृद्धि।
Occlusive रोग: लक्षण
रोग बिस्तारै विकसित। exacerbation को अवधि लामो remissions बदलिएको हुन सक्छ।4रोग चरणमा भेद:
पहिलो - ischemic चरण पिन र सुई, हिँड्ने बेला सानो थकित खुट्टा, मांसपेशी ऐंठन, chilliness एक भावना द्वारा विशेषता छ।
trophic विकार - - दोस्रो लागि अचानक थकान र चिसो खुट्टा संवेदनशीलता द्वारा विशेषता, मांसपेशी दुखाइ को घटना हुँदा हिड्ने, छाला तापमान मा discoloration र कमी। यो अवधिमा "अनिरंतर claudication", एक धेरै छोटो दूरी छ र अचाक्ली रोगी को गतिविधि सीमित। त्यहाँ प्रभावित limb वा तिनीहरूलाई को एक कमी रोक्न धमनी पल्सेशन एक कमजोर छ।
Necrotizing चरण, स्थिर "अनिरंतर claudication" नीरस दुखाइ द्वारा विशेषता छ तेर्सो स्थिति, खुट्टा वा interdigital ब्रश मा अल्सर को गठन मा परिलक्षित। गंभीर दुखाइ गर्न, विरामीहरु या त गर्मी छोड्न कारणले वा गर्न सक्छन् खुट्टा शांत: बिकृति नङ, आफ्नो वृद्धि त्यहाँ खुट्टाको औंलासम्म तापमान एक तीव्र प्रतिक्रिया छ, slows तल। ulcerative lymphangitis प्रक्रिया द्वारा सामेल गर्न सक्छन्, thrombophlebitis। यो चरण मा slightest आघात गैर-निको अल्सर को गठन गर्न जान्छ।
occlusive रोग कोथ संबंधी चरणमा यो वास्तवमा द्वारा विशेषता छ कि रगत प्रसार विषाक्त पदार्थ को हृदय प्रणाली, कलेजो र मिर्गौला Cortex असर मा। त्यहाँ व्यापक हुन सक्छ ऊतक necrosis, स्थिर बलिरहेको दुखाइ मात्र सो को रोगी deprives, तर अक्सर गंभीर निराशा सँगसँगै।
Occlusive रोग: उपचार
हाम्रो समय मा, अझै त्यहाँ रोग को प्रगतिशील पाठ्यक्रम रोक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुनै कट्टरपंथी उपचार हो। यसको प्रकटीकरण को प्रारम्भिक चरणमा प्रक्रिया सुस्त गर्न सक्ने सम्भावित मात्र व्यापक चिकित्सा उपचार।
यो चिसो, ओसिलो कोठा, विशेष गरी आफ्नो खुट्टामा उभिएर अवधिको सम्बन्धित काम गर्न, पिउने रक्सी, धूम्रपान नगर्न गर्न रोग को विकास गर्न योगदान गर्ने कारणहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण छ। सफल उपचार भने सम्भव, उच्च-ऊर्जा खाना र न्यूरो-भावनात्मक तनाव, शारीरिक उपचार को प्रयोग को प्रयोग को कमी योगदान र, एक स्पा उपचार।
sympathectomy, बाइपास सर्जरी वा - रूढिवादी विधिहरू संग उपचार सफलता को अभाव मा, सर्जरी लागू अंगच्छेद।
Occlusive रोग - एक गम्भीर रोग र डाक्टर गर्न समसामयिक उपचार सफल उपचार गर्न प्रमुख हुनेछ।
को चिउँडो मा मुखासे को मुख्य कारण के हो
किन म नवजात मा उपचार आशुक्रोधी गर्मी चाहिन्छ
बच्चा मा Urticaria: उपचार, जीवन शैली, कारण
को गोडा संयुक्त मा तरल पदार्थ
को शट मा धक्का कसरी हटाउने?
आंत्र समस्या एक लक्षण प्रकट जस्तै?
एक सजावट तत्व रूपमा पर्खाल मा एक आला
बिरालोहरु को लागि फीड "Purina": समीक्षा। बिरालोको लागि उत्तम खाना के हो?
पास्कल Verlyayn - युवा दौड चालक प्रतिज्ञा गर्नुभएको
क्षेत्र दक्षिणी युरोप। स्थान, जलवायु, सांस्कृतिक विशेषताहरु
खण्डमा ब्रेइड - हराएको समय एक कथा
को Ostankino टावर एक आगो (अगस्ट 2000)
भिटाली Gogunsky: Filmography, जीवनी र अभिनेता गीत
कुत्तों मा क्रिप्टपोर्चिज्म - कारणों र उपचार
डोमिनिकन गणतन्त्र: महिनाको लागि मौसम। हावा तापमान र पानी
स्क्यानहरू कसरी हटाउनुहुन्छ?
विशेष विवाह मोमबत्ती - न्यानोपन र चूल्हा को एक प्रतीक